महिलाहरु पनि कस्ता-कस्ता कुलतमा फस्छन ! | newsnepali.com
महिलाहरु पनि कस्ता-कस्ता कुलतमा फस्छन !
Published on: Fri, Jan 3rd, 2014 By
उफ् ! मानिसको कूलत पनि कस्तो कस्तो हुन्छ ? पत्याउन गाह्रो हुने । एक महिला पेन्ट अर्थात रंग पिउने दुव्र्यसनीमा फसेकी छिन् । ट्राभल लिभिङ च्यानलमा प्रशारित ‘मेरो अनौठो दुब्यसनी’ कार्यक्रममा ४३ वर्षीया महिलाले आफूले ३ वर्षदेखि पेन्ट पिउने गरेको सार्वजनिक गरेकी छन् ।
दुई सन्तानकी आमा हीथर बालले अहिलेसम्म झण्डै तीन ग्यालिन रंग पिइसकेकी छिन् । ‘जब घाँटीबाट तल जान्छ, यो दूध वा बाक्लो तरल पदार्थ जस्तो हुन्छ’ उनले भनेकी छिन्–‘निकै तातो र राम्रो महशुस गर्छु । यो रासायनीक स्वाद मेरो लागि राम्रो छ ।’
उनी बजार गएर मन पर्ने पेन्ट छान्छिन आफ्नो तलतल मेट्न । आमाको निधन भएपछि आफू यो कूलतमा फसेको उनले बताइन् । तर, अहिलेसम्म उनले पेन्ट पिउने गरेको परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा थिएन । बच्चाको अगाडी आफुले कहिले पनि रंग नपिएको उनले बताइन् ।
रंग पिउनका लागि उनले मार्कर पेन प्रयोग गर्छिन् । हरेक दिन उनी बजारमा गएर त्यही मार्कर पेनमा रंग भर्छिन र पिउँछिन् ।